Published June 11, 2020 at 9:09 PM CDT
Departmentin fayyaa Iowas akka gabaasetti namni haarawa coronavirus du’ee 10 yoo ta’u kan qabame 330 sa’aati 24 keessatti. Waliigalatti namni du’ee 639 yoo ta’u 22,900 kan qabamedha.
Hojaataan yeroo dheera Tyson kan Storm Lake sababa covid-19 du’uu himan.
Umrii 60 kan ta’e Ken Jones torbaan darbe keessa erga turban lama hospitaala dabarsee booda du’e.
Jones hojjattoo waa maintenance, achii keessaa waggaa 12 dalageedha.
Tyson akka torbaan tartee himeeti hojjattoota Storm Lake 2,300 keessa namani 600 coronavirus qabamuu ibse. Buena Vista County keessati namni 4 du’eera, akkasumas namnii 1,400 qabamaniiru.
Secretarin state Iowa akka jetteti karaa xalayaatin waraqaa filannoo nama maraaf hin erginuu seeri kun kan bahes harbaa warra tumtuu seera Republican irraa bahe.
Akka baratamaati filattooni kan gaafatan filannoo June 2 dhaaf karaa xalayaatin yoking online, secreterin Republican kan state Iowa Paul Pate xalayaa dhaan ummani gaafate erguu murteesse, sababa dhukuba coronavirus irraa kan ka’e.
Kutaan Iowa dhumaratti record haarawa filannoo jalqabatif galchan.
Hojjatooni Iowa akka kamsaa gabaasannitti ummanni 10,000 oltuu torbaan June 6 hojidhabdummaa guutatte.
Kunnis nama 6,900 torbaan tarte keessa guutamen walitti madaalama.
Lakkoofsii guddaan hojii dhabdumma guute hojattoota mana warshaatti.
Gurmeesitonni Woodbury county fair akka jedhanitti yeroo dhaaf H.4 fair qopheesuf qophiira jirani, waan qopheesan irratti haga silaa haasahumara jiran. Akkasumas state fair dhaabu isaani dhagahuf baay’ee itti dhagahame. Garuu murtti kana maalif akka murteesan nuu gala jedhan.
Local News LocalIowaWoodbury CountyNebraskaSouth DakotaStorm LakeTyson FoodsnewsDakota CountyIowa Workforce DevelopmentIowa Department of Public HealthCOVID-19Oromo
Har’a sa’aati booda magaala Sioux City keessati hiriiri nagahaa geggeefamera.Kan jaljaqabame parki cook irrraa namoota dhibaa 2 lakkahamuu bahee.Ummannis…
Jiraatan magaala Woodbury county kan biraa sababa coronavirus du’eera
Jiraatan magaala Woodbury county kan biraa sababa coronavirus du’eera. Akka manni fayyaa Sioux land gabaaseti namichi du’e kun nama umrii 61-80 jidduu…